Jawaari: Berri ayuu furmayaa shirka dib u sheehiisiinta Koonfur Galbeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
13-08-2014: Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo Baydhabo ku sugnaa maalmahan ayaa faah faahin ka bixiyey shirka dib u heshiisiinta shacabka Koonfur Galbeed oo maalinnimada berrito ah ka furmi doona magaalada Baydhabo.
“Munaasabadda furitaanka Shir weynaha dib u heshiisiinta shacabka Koonfur Galbeed waxaa kasoo qeybgalaya berri hadii uu Alle idmo Ra’isulwasaaraha Xukuumadda, xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada, Xildhibaanno, Odayaasha Dhaqanka iyo marti sharaf kale waxaana qabashada shirkan aragti mideysan kusoo dhaweeyey maanta Odayaasha Dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Koonfur Galbeed Soomaaliya” ayaa lagu yiri war kasoo baxay xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof. Jawaari.
Shirkaan oo uu horay u shaaciyey gudoomiye Jawaari waxaa kasoo horjeestay kooxda uu hogaamiyo Madoobe Nuunow Maxamed, waxeyna sheegeen in kulamadii ay la yeesheen Prof. Jawaari ay ku dhamaadeen natiijo la’aan, ayna xitaa ay ka hor imaan doonaan in R/wasaare C/weli Sheekh uu tago Baydhabo.
“Natiijo la’aan ayay ku dhammaaday kulan aan la yeennanay Prof. Jawaari kuwaasoo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo, mana garanayno shirka dib u heshiisiinta ah cidda ka qaybgalaysa ama loo qabanayo,” ayuu yiri C/llaahi Maxamed Idiriis oo ka mid ah xubnahasheegta maamulka lixda gobol.
“Shirka dib u heshiisiinta uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka yaa loo qabanayaa? waayo innagu waxaan caddeyneynaa in kulammadii ka dhacay Baydhabo ay guul-darreysteen.” Ayuu sidoo kale yiri C/llaahi Maxamed Idiriis.